संविधानसभाको बैठकले संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पारित
काठमाडौ, मंसिर २० । आज बसेको संविधानसभाको बैठकले अगामी जेठसम्ममा नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पारित गरेको छ । बिहान बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले
लोडसेडिङ ५ घण्टामा झार्ने सरकारको योजना : उर्जामन्त्री
काठमाडौं, मंसिर २० । उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले २ सय मेघावाटको नयाँ डिजेल प्लान्ट जडान गर्ने र भारतबाट १ सय मेघावाट विद्यूत आयात गरेर सरकारले ५ घण्टामा लोडसेडिङ
घाँटी रेटेर फालिएको अवस्थामा शव वरामत
काठमाडौ, मंसिर २०। राजधानीको पेप्सीकोलामा आज विहान एक जनाको शव फेला परेको छ । मनोहरा खोलाको पुलमुनी गोविन्द ढुंगाना नाम गरेको व्यक्तिको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको
चितवान भरतपुर कारागारमा झडप, झडप निन्दनीय भएको भन्दै तरुण दलद्घारा चितवन बन्द आहवान
चितवान, मंसिर २०। चितवनको जिल्ला भरतपुर कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बन्दीमाथि आज विहान सोही कारागारमा रहेका अर्को समूहका बन्दीले आक्रमण गरेका छन् । आक्रमणमा परी नेपाली
युवा संघको उपत्यका बन्द फिर्ता
काठमाडौं, मंसिर १९ । नेकपा एमालेको भातृसंगठन युवा संघ नेपालले आब्हान गरेको मंगलबारको उपत्यका बन्द फिर्ता लिएको छ । युवा स्वरोजगार कोषको रकम पारदर्शी गर्नुपर्ने लगायतका मागमा
ललितपूर बन्द खुल्यो
ललितपूर, मंसिर १९ । सुनचाँदी व्यवसायीको हत्याको विरोधमा गरिएको आजको ललितपूर बन्द फिर्ता भएको छ । आयोजकले दिएको जानकारी अनुसार बन्द अपरान्ह ४ बजे बाट खुल्ला गरिएको
नेपाल र भारतको सम्बन्धले नयाँ उचाई लिने : प्रस्तावित राजदूत कार्की
काठमाडौं, मंसिर १९ । भारतकालागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत राम कार्कीले नेपाल र भारतका सम्बन्धले नयाँ उचाई प्राप्त गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले
कांग्रेस तत्काल राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको पक्षमा छैनः महत
राष्ट्रिय सरकारको विषयमा आ–आफ्नै मतः काठमाडौं, मंसिर १९ । नेपाली कांगेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाली कांग्रेस तत्कालै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र वर्तमान सरकार
कार्यकारी नियुक्ति अब खुल्ला पतिस्पर्धाबाट : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, मंसिर १९। सार्वजानिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिवद्घता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार संसदको सार्वजनिक देखा समितिमा सभासदहरुले उठाएको बिषयलाई जवाफ दिदै
अबको सरकारको नेतृत्व आफुले गर्ने : देउवा
बैतडी,मंसिर १९। कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले अब बन्ने सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने र त्यसको नेतृत्व आफुले गर्ने दावी गरेका छन्। बैतडीमा प्रेस
विद्यार्थीद्धारा मेची राजमार्ग यातायात अबरुद्ध
काठमाडौं, मंसिर १९। मेची राजमार्गमा यातायात सेवामा यातायात व्यवसायीले नेपाल सरकारले तोकेको भाडादर लागु नगराएको भन्दै चार विद्यार्थी संगठनले मेची राजमार्गमा आजदेखि अनिश्चितकालिन यातायात वन्दको
शुरु भयो लोडसेडिङ, दैनिक ६ घन्टा विद्युत काटिने
काठमाडौं, मंसिर १९। नेपाल विद्युत प्राधीकरणले मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना मर्मत काम गर्न लागेको र नदीहरुमा पानीको तह घटेकाले भन्दै आजदेखि दैनिक ६ घन्टा विद्युत कटौति हुने
डा.भट्टराई नेतृत्व सरकारको मन्त्री र मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार तिब्र रहेको दावी : सुजता
विराटनगर, मंसिर १९। काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले डा. भट्टराई नेतृत्व सरकारको मन्त्री र मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार तिब्र रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थाल्नुपर्ने बताएकी छिन्।
एमालेनिकट अनेरास्ववियुद्धारा प्रर्दशन
काठमाडौं, मंसिर १९। युवा स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोग गरेको विरोधमा उत्रिएका युवाहरुमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आज उपत्यकाका सबैजसो कलेज क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
विभिन्न कार्यक्रमका साथ स्वर सम्राट नारायण गोपालको २१औ स्मृति दिवस मनाईदै
काठमाडौं, मंसिर १९। स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको २१ औ स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदै छ । यसै अवसरमा काठमाडौको महाराजगंजस्थित नारायण गोपाल चोकमा
हत्याको विरोधमा आज ललितपुर वन्द
ललितपुर,मंसिर १९। ललितपुर स्थित एक सुन पसलमा कार्यरत कामदारको हत्याको विरोधमा व्यवसायीहरुले आज ललितपुर जिल्ला वन्द गराएका छन् । पुल्चोकस्थित गुण ज्यास पसलमा कार्यरत कामदार जुजुकाजी
सुकुम्वासीघरहरु अहिले नै नहटाउन आदेश : पुनराबेदन अदालत
काठमाडौं, मंसिर १९। सरकारले सुकुम्वासी घर भत्काउन आदेश दिए पनि पुनराबेदन अदालत पाटनले राजधानीका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ति मंसिर २५ गतेसम्म नहटाउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी
Date : 04 Dec 2011
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, २ जना घाइते
दाङ, मंसिर १८ । दाङमा आइतवार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । लमहीबाट घोराहीतर्फ आउँदै गरेको बा ४८
फैजान अहमदलाई शहीद घोषणा गर्न सरकार सहमत
काठमाडौं, मंसिर १८ । गत असोजमा राजधानीमा अज्ञात समूहबाट हत्या गरिएका ईश्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदलाई शहीद घोषणा गर्न सरकार सहमत भएको छ । मुस्लिम
सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रमुख तीन दलको शिर्ष नेताहरुलाई जिम्मा
काठमाडौं, मंसिर १८ । मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलको बैठकले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि छलफल र गृह कार्य गर्ने जिम्मा शीर्र्ष नेताहरुलाई दिएको छ । काठमाडौंको
युवा स्वरोजगारको हालसम्मको प्रगती बिवरण बुझउन निर्देशन
काठमाडौं, मंसिर १८। ब्यबस्थापिका संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले हालसम्म गरेको उपलब्धी सात दिन भित्र समितिमा पेश गर्न युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषलाई
कर्मचारी आन्दोलनबाट जनकपुर रेल्वे सेवा प्रभावित्
जनकपुर, मंसिर १८। नेपालको एकमात्र जनकपुर रेल्वे सेवा कर्मचारी र महाप्रवन्धकको विवादका कारण दुई दिनदेखि बन्द रहेको छ । उक्त रेल कर्मचारीहरुले काम नगरी इन्जिनमा चिनी
जंगली हात्तिको आक्रमणबाट छुट्टछुट्टै ठाउमा दुईको मृत्यु
झापा, मंसिर १८। झापाको खुदुनावारी र बुधबारेमा आज विहान छुट्टछुट्टै जंगली हात्तिको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा झापाको खुदुनावारी झेलीनीकी ५२ बर्षिया सावित्रा
आजबाटै सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल सुरु गरिने : दाहाल
काठमाडौं, मंसिर १८। दलहरूबीच चाडैनि सहमतिको सरकार बनाउने चर्चा भइरहेका बेला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजबाटै नै त्यसबारे छलफल सुरु हुने बताएका छन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम
आजदेखि सुकुम्बासी बस्तिहरु हटाईने : सरकार
काठमाडौं, मंसिर १८। सरकारले आजदेखि राजधानीका बागमति र अन्य नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ति हटाउने निणर्य गरेको छ । यसका लागी सरकारले ५ दिने सूचना निकालेको थियो जुन
यसपालिको एसएलसी परीक्षा चैत ७ गते
भक्तपुर, मंसिर १७ । २०६८ सालको एसएलसी परीक्षा आगामी चैत ७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले एसएलसी परीक्षाको मिति घोषणा गरेको
शान्तिप्रक्रिया पूरा नभइन्जेलसम्म माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने : कोइराला
काठमाडौं, मंसिर १७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले शान्तिप्रक्रिया पूरा नभइन्जेलसम्म माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने बताएको छन् । शनिबार राजधानीमा सहिद लीला—यशोदा दाहाल प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित सहिद लिला—यशोदा
झमक घिमिरेलाई नागरिक अभिनन्दन
धनकुटा, मंसिर १७ । मदन पुरस्कार पुरस्कारबाट सम्मानित साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेलाई आज धनकुटावासीले नागरिक अभिनन्दन गरेका छन् । धनकुटाको त्रिबेणी उच्च माविमा एक समारोहकावीच साहित्यकार
माओवादीले सत्ता कब्जा गरिछाड्ने : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं, मंसिर १७ । एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि माओवादीले सत्ता कब्जा गरिछाड्ने बताएका छन् । आज राजधानीमा विभिन्न समूह परित्याग गरी
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार काग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ : सुजाता
काठमाडौं, मंसिर १७ । साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार काग्रेसको नेतृत्वमा बन्नु पर्ने भन्दै शान्ति प्रक्रिया टुङगीएपछि काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार
Pages 132 : You are at page 101 of 132